गाडी किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
गाडी किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
भदौ २२, २०७६ आइतबार १४:२१:१८ | उज्यालो सहकर्मी
ग्राहकको रोजाइमा सस्तो र धेरै माइलेज दिने गाडी नै हुन्छ । ग्राहकले गाडी किन्दा गाडीको मूल्य र माइलेज बाहेक अरु कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
गाडी किन्नुभन्दा पहिले जान्नुपर्ने कुरा
सडकमा गुड्ने गाडी दुई किसिमका हुन्छन्, प्यासेन्जर भेइकल र कमर्सियल भेइकल । सामान्य रुपमा यो दुई किसिमका गाडीलाई बुझ्दा जुन सवारी साधन व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई कर्मसियल भेइकल भनिन्छ र जुन सवारी साधन व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई प्यासेन्जर भेइकलको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
एउटा गाडी खरिद गर्दा ग्राहकले धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । पहिलो कुरा त ग्राहकले आफूले किन्ने गाडी के का लागि किन्दैछु र के प्रयोजनको लागि चलाउने हो भनेर राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।
कसैले कुनै गाडी किन्यो भनेर त्यसैको लहलहैमा लागेर उसको जस्तै गाडी किन्छु भनेर बहकिनु भएन । मैले गाडी किनेपछि कहाँ चलाउँछु, के-के कामका लागि प्रयोग गर्छु, गाडी राख्ने पार्किङ स्पेस के छ भन्ने सोचेर गाडी छनोट गर्दा निकै राम्रो हुन्छ ।
दोस्रो कुरा गाडी किन्नको लागि आफूसँग भएको बजेट महत्वपूर्ण कुरा हो । मैले यतिसम्मको मूल्यमा गाडी किन्दा हुन्छ र हामी सक्छौं भन्ने एउटा बजेट सीमा हुनुपर्छ ।
तेस्रो कुरा तपाईँले छान्नु भएको गाडीको परफरमेन्स, विशेषता र क्षमताको बारेमा खोज्ने र जानकारी लिने गर्नुपर्छ । गाडीको विशेषतामा त्यो गाडी कति सीसीको हो, टर्क कति छ, इञ्जिनको पावर कति छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
र यसपछि टेस्ट ड्राइभ । कुनै पनि गाडी किन्नुभन्दा पहिले आफूले चलाएर त्यसको अनुभूति लिनु उपयुक्त हो । अरुले चढेको छ भनेर किन्नुभन्दा पनि आफैंले चढेर त्यसको बारेमा जान्नु राम्रो हुन्छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा हो, सुरक्षा । हामीले कुनै पनि गाडी किन्दा सुरक्षाको पक्षलाई सबैभन्दा बढी महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । र यसका लागि हामीले गाडी खरिद गर्नुअघि त्यो गाडीमा के-के सुरक्षाका प्रविधि र सुविधा छन्, त्यो बुझ्नुपर्छ । र त्यसमा भएका सुरक्षाका सुविधाहरु 'ग्लोबल एन क्याप' जस्ता संस्थाबाट प्रमाणित भएको छ कि छैन जान्नुपर्छ । नेपालको सडक त्यति सुरक्षित र राम्रो नभएकोले सुरक्षाको कुरामा ग्राहकहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसपछि मात्र गाडीका अरु विशेषताको कुरा आउँछ । त्यो गाडीमा भएका फिचर कस्ता छन् ? त्यसमा पनि ग्राहकलाई बढी चाहिने र प्रयोग गर्ने वा हुने फिचर के-के हुन् ? त्यो फिचर त्यस गाडीमा छन् कि छैनन् ? भनेर जान्नुपर्छ । फिचर धेरै भएका गाडीहरु खोजेर मात्रै हुँदैन ।
अर्काे कुरा गाडी सधैँ किनिरहने कुरा होइन । आज किन्यो, भोलि परिवर्तन गर्छु भन्ने हुँदैन । ग्राहकले यसको प्रयोग लामो समयसम्म गर्छन् । त्यसैले गर्दा यसको सर्भिस र मर्मत सम्भार के हुन्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।
जुन कम्पनीको गाडी किनिन्छ, त्यसको सर्भिस सेन्टर र नेटवर्क कहाँ कहाँ छन् ? कुनै यात्रामा निस्किँदा कतै केही समस्या भयो त्यसको समाधान गर्ने सेन्टर कहाँ छन् ? र यसबाट के कस्ता सुविधाहरु पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ ।
गाडी मर्मत गर्नको लागि आवश्यक मर्मत साम्रगीहरु सम्बन्धित कम्पनीको वर्कशपमा छन् वा छैनन् ? यसको अलावा अतिरिक्त सेवा, सुविधाहरु केके छन् ? नियमित सर्भिसिङ, मर्मत सम्भारको साथै अन्य के के थप सेवाहरु पाउन सकिन्छ ? गाडीको कुनै पार्टपुर्जा फेरबदल गर्नु परेमा त्यसको उपलब्धता कतिको सहज छ ? भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ ।
किन्नुभन्दा पहिले यस्ता कुरामा जानकार भएमा आफूले खोजेजस्तै सुरक्षित र भरपर्दाे सवारी मिल्न सक्छ ।
(टाटा मोटर्सका प्यासेन्जर भेइकल शाखाका प्रमुख व्यवस्थापक कुमार भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
सार्वजनिक भयो प्रधानमन्त्री ओलीको पुस्तक ‘भिजन टु एक्सन’
इरानमा कोरोना भाइरस : पाँच जनाको ज्यान गयो, २८ जनामा सङ्क्रमण
एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन हुन्छ : नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड
तीनकुने जागृतिनगरकाे अतिक्रमित जग्गामा डोजर चल्यो
भारत भ्रमणकाे क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले विश्वकै ठूलो रङ्गशाला...
छोरीको बीमा गराउनुस्, नि : शुल्क इन्टरनेट पाउनुस् !
हेटौँडामा वाग्मती प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु
आहा रारा गोल्ड कप : पुरस्कार राशी बढ्याे, यस पालादेखि १० लाख...
अब पाइलट पढ्न बानी ब्यहोरामा ‘पास’ हुनुपर्ने